ဆီရှောင်တဲ့ အစားအစာကိုမှကြိုက်နှစ်သက်တဲ့သူတွေအတွက်အထူးသင့်လျော်တဲ့…….. – FoodiesNavi
မြန်မာနိုင်ငံကအစားအစာ တော်တော်များများဟာ စားသုံးဆီကိုအသုံးပြုပြီး ချက်ပြုတ်ထားတာများပါတယ်။ နေ့စဉ်နဲ့အမျှ ဆီပါတာတွေပဲစားသုံးနေရင်တော့ ကျန်းမာရေးကိုထိခိုက်နိုင်သလို ရေရှည်စားသုံးရာမှာလည်း ရိုးအီနေလောက်ပါပြီ။ ဒါ့ကြောင့် Foodies Navi ကနေဆီမပါတဲ့ ရခိုင်ရိုးရာစစ်စစ်အစားအစာတွေရနိုင်တယ့် မင်းလမ်းရခိုင်မုန့်တီနဲ့ပင်လယ်စာဆိုင်နဲ့မိတ်ဆက်ပေးချင်ပါတယ်။
မသိသေးသူတွေအတွက် ဗဟုသုတပွားနိုင်သလို သိပြီးသားလူတွေအတွက်လည်း နှစ်ထပ်ရှိတော့ပိုမှတ်မိတာပေါ့နော်?? မင်းလမ်းရခိုင်မုန့်တီနဲ့ပင်လယ်စာဆိုင်ရဲ့ လိပ်စာတွေကတော့–
ဆိုင်(၁)-အမှတ် (၁)၊ မင်းလမ်း ၊ ဆရာစံ(တောင်)စံပြရပ်ကွက်၊ဗဟန်းမြို့နယ် ၊ ရန်ကုန် ။
ဆိုင်(၂)-အမှတ်(၁၆)၊ ပါရမီလမ်းနှင့်အနောက်မေခလမ်းထောင့် ၊ မရမ်းကုန်းမြို့နယ် ၊ ရန်ကုန် ။
ဆိုင်(၃)-အမှတ် ၇၇(ဂ) ၊ ရှင်စောပုလမ်း ၊ မြေနီကုန်းစီးတီးမတ်အနီး ၊ ဝင်ဆာဂါးဒင်းအိမ်ရာ ၊ စမ်းချောင်းမြို့နယ် ၊ ရန်ကုန် ။
ဆိုင်(၄)-အင်းယားကန်ပန်းခြံ(အင်းယားလမ်းနှင့်ပြည်လမ်းထောင့်၊ တံတားဖြူမှတ်တိုင်) ၊ ကမာရွတ် ၊ ရန်ကုန် ။
ဆိုင်(၅)-အမှတ်(၆၉) ၊ ဝေဇယန္တာလမ်း ၊ အောင်ရတနာမီးပွိုင့်အနီး ၊ စက်မှုဇုန် (၈)ရပ်ကွက် ၊ တောင်ဥက္ကလာပမြို့နယ် ၊ ရန်ကုန် ။
မင်းလမ်းရခိုင်မုန့်တီနဲ့ပင်လယ်စာဆိုင်မှာတော့ ရခိုင်ရိုးရာစစ်စ်လက်ညှစ်မုန့်တီနဲ့ မုန့်ဖတ်သုတ်အပြင် ရှားပါးပြီးအရသာထူးခြားတဲ့ပင်လယ်အစားအစာတွေဖြစ်တဲ့ ကင်းပုဇွန် ၊ ငါးရွှေမီးကင် ၊ ယောက်သွားကင် ၊ ငါးပါးနီပေါင်း ၊ ကမာဟင်း ၊ ဂဏန်းဟင်း ၊ ပြည်ကြီးငါးသုပ် ၊ ပြည်ကြီးငါးကင် ၊ ငါးမုန့်ရခိုင်ချက် ၊ လူမမာတွေအတွက် အစာကြေလွယ်ပြီးအာဟာရဖြစ်စေတဲ့ ငါးဆန်ပြုတ် ၊ ငါးလိပ် (အကင် ၊ အပေါင်း ၊ အကြော် ၊ အချက်) ၊အဏ္ဏဝါဟင်း၊ပင်လယ်စာထမင်းကြော်၊ပုဇွန်ဖြူကင်၊ပုဇွန်ကင်၊ပုဇွန်ပွကြော်၊ပုဇွန်အရည်သောက်၊ပုဇွန်ချက်၊ပုဇါန်ချက်၊ပြည်ကြီးငါးသုပ်၊ပြည်ကြီးငါးကင်၊သင်္ဘောသီးသုပ်စတာတွေအပြင်မုန့်လက်ဆောင်းနဲ့သစ်သီးဖျော်ရည်မျိုးစုံကိုပါရရှိနိုင်ပါတယ်။
ကဲ….Menu တွေကတော့ ရှားပါးပင်လယ်စာအစုံဆိုတော့ မြည်းစမ်းသုံးဆောင်ချင်စိတ်တွေ ဖြစ်ပေါ်နေမှာပဲနော်။? ဟင်းအမည်တွေကထူးခြားသလို အရသာကလည်း ဆွေမျိုးတွေကိုစာရင်းနဲ့ကြိုမှတ်ထားရလောက်အောင်ကောင်းတယ်နော်။? ဆီပါတဲ့အစားအစာမစားချင်သူတွေနဲ့ ပင်လယ်စာကြိုက်သူတွေအတွက်လည်း ကွက်တိပဲနော်။ ဆိုင်ခွဲ(၅)ဆိုင်တောင်ရှိတာဆိုတော့ ကိုယ့်အိမ်နဲ့နီးတာကိုရွေးချယ်ပြီး သွားရောက်သုံးဆောင်နိုင်ပါပြီနော်။
Image Source : www.facebook.com/minlanseafood
In Restaurant Guides Tagged Rakhine foods Leaveacomment
မြန်မာ့ခံတွင်းနဲ့ပနံသင့်စေမယ့် ပထမတန်းစား Pizza အရသာကိုခံစားလိုပါသလား???